22 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 22 2013
Ankaray ဘူတာရုံ "စာရိတ္တ" ကြေညာချက်!
22 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
Ankaray ဘူတာရုံ "စာရိတ္တ" ကြေညာချက်! : က Ankaray ဟာလွတ်မြောက်ရေးဘူတာရုံခရီးသွားလာသောတူရကီရဲ့ Dikimevi-ASTI လိုင်းအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာ "ကိုယ်ကျင့်တရားကြေညာချက်" ပါလီမန်၏ပြောဆိုချက်ကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ Ankaray ထဲကကယ်တင်ခြင်းဘူတာ "ချစ်ခင်ရပါသောခရီးသည်, ကျေးဇူးပြု. ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာအရာရှိများ၏ကွားနိုငျသတိပေးမှုစနစ် [ပို ... ]
ပြည်တွင်းသတင်းရပ်ကွက်များအနေဖြင့်စည်ပင်သာယာရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် created စီမံကိန်းရုံးအလုပ်တူရကီမြို့တော်နယ်ပယ်, "က Metro နှင့်ဒေသခံ Ankaray အပိုအစိတ်အပိုင်းများပြပွဲ" ကိုဖွင့်။ ပြည်တွင်းသတင်းရပ်ကွက်များအနေဖြင့်စည်ပင်သာယာရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် created စီမံကိန်းရုံး, "က Metro ၏အလုပ်တူရကီမြို့တော်နယ်ပယ် [ပို ... ]
မြေအောက်ကားများအတွက် The Daily Telegraph သတင်းçatanlıkအမှိုက်, ပရာ့ဂ်၏ချက်သမ္မတနိုင်ငံမြို့တော်မြေအောက်ရထားကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ "Ropid" အလုပ်များအလုပ်နှင့်အတူအစေခံချင်နှင့်စည်ကားမြို့ဘဝကိုဖို့သာ access ကိုပေးသည်မထားဘူး။ Ropid ပီ Filip Drapala မကြာသေးမီက [ပို ... ]
RayHaber 22.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
အဆောက်အအုံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း Dinar နှင့်Dazkırı Stations Ballast တင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုယူလိမ့်မည်သံမဏိတံတားများပန်းချီဆွဲခြင်းခံရမည်အဝတ်အထည်များဝယ်ယူမည်အလားတူမီးရထားလမ်းကြောင်းသတင်းများနှင့်အခြားသတင်းများ Bursa Metropolitan Municipality 2013 ဘဏ္Investmentာရေးနှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Rized Teleferik Wagon သေဆုံး
လူတစ်ဦးနှုန်းလှည်း Wagon သေ Tetovo ဦးခေါင်းအတွင်းမြို့မှာကွယ်လွန်သွား cable ကိုကားတစ်စီး cable ကိုကားများ Rized ။ စိုစွတ်လက်ဖက်ရည်ဥယျာဉ်၌စရိုက်ကေဘယ်လ်ကားတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်မြို့Soğuksu Long က (50) ၏ Shaukat လီရပ်ကွက်အတွင်းသည်လှည်းကိုကျော်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုရိုက်ယူခြင်းခေါင်းပေါ်မှာကျဆင်းခဲ့သည်။ Sahin, [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်း၏ Haydarpasa ရထားဆိုက်ရောက်
ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်း၏ Haydarpasa ရထားဆိုက်ရောက်: အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT), တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးများစတင်နှင့်အတူဥရောပ6၌ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု. နိုင်ငံများအကြားတူရကီ yht'n ။ , 8 ကမ္ဘာကြီးကို။ ဒါဟာတိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ TCDD ရထား၏နာမတော် [ပို ... ]
အမှားရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု: ဒဏ်ရာရသူ 3
အမှားရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု:3တစ်ဦးရထားတိုက်မိသောကားကိုအတူအဆင့်ကူးဝင်ရောက် Adana Sivas အချိန်ဒဏ်ရာရ။ မတော်တဆ3ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်မီးရထားစက်ရုံထဲကနေကြေညာချက်အရ, တူရကီ-Sivas 63301 သင်္ဘောသမီးကညာကိုခရီးစေသည် [ပို ... ]
သငျသညျရထားလမ်းတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ် Samsun ဒုတိယဝန်ကြီးပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး John ဌာနမှူး, အရှေ့ပင်လယ်နက်ရထားလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီကစနစ်တွင်ထည့်သွင်းထားရမည်ဟုဂျာနယ်တစ်ခုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမတစ်ချက်သာမန်ဝင်ငွေမှာဒုတိယဝန်ကြီးတစ်ဦးကြေညာချက်ကဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင် [ပို ... ]
တတိယလေဆိပ်နှင့်အတူ Intersected ကြောင်း3တောငန်းရွှေ့ပြောင်းလမ်းကြောင်းငှက်များ၏ရွှေ့ပြောင်းလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလေဆိပ်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ငှက်တို့လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ကျွမ်းကျင်သူများကပုံမှန်ငှက်ရေတွက်အောင်အကြံပြု, ဖြစ်နိုင်သမျှမတော်တဆမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ပေါင်း2။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် [ပို ... ]
ဇွန်လ 1: TCDD အာရုံကိုနောက်ဆုံးနေ့အငြိမ်းစားပါလိမ့်မည်
22 / 05 / 2013 Levent Ozen 1
TCDD အာရုံကိုနောက်ဆုံးနေ့အငြိမ်းစားလိမ့်မည်: တူရကီ၏ဇွန်လ 1 မီးရထားပို့ဆောင်ရေးလစ်ဘရယ်များနှင့် 6461 1 2013 မေလတွင်အင်အားစုသို့ ဝင်. အရေအတွက်ကိုအပေါ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤပညတ်တရားကိုမလိုအပ်, သူမသည်အရပ်ဘက်ကျွန်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နေအနားယူ [ပို ... ]
သားကောင်စိုက်ပျိုးမြေတောင်သူလယ်သမားများ၏၏မီးရထားလမ်း၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရွာ၌ပြည်နယ်၏မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားကူး left ကြောင့်ရွာသားများဝေဖန် high-speed ကိုမီးရထားလိုင်းသားကောင်များထားခဲ့တယ်။ ဒေသခံပြည်သူများကိုလည်းပြဿနာကိုသိပေမယ့်အရာရှိများအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Konya-တူရကီ [ပို ... ]
တူးဖော်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်စတင် Sancaktepe မြေအောက်ရထားဘူတာရုံသည် Anatolian ဘက်၌ဒုတိယမြေအောက်ရထားဘူတာရုံ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့စတင်နေပါတယ်။ အရာတူးဖော်အလုပ်စတင် "Ümraniye" ဘူတာရုံမှစံချိန်အချိန်Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe မြေအောက်ရထားခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ဘူတာရုံတူးဖော် [ပို ... ]
ပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများအတွက်ကေဘယ်လ်ကားအရောင်များ | Bursa
အသစ်ကကေဘယ်လ်ကားဟိုတယ်ဇုန်အရောင်အတွက်တိုက်ခိုက်နေသည့်ကြိုးတပ်လေယာဉ်ပြင်းစွာသောအဘယ်အရာကိုအရောင်တက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖြစ်ပါတယ်။3လည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ထားပြီးမဲပေးပြခန်းလူမှုပလက်ဖောင်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ website ကို 8,5 [ပို ... ]
သူတို့ဟာ Cudi တောင်တန်း Cableway (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ကိုစည်းဝေးပွဲချင်
တောင်ပေါ် Cudi သူတို့ လုပ်. အကြောင်းကို 50-လူတစ်ဦးအဖွဲ့ထဲကထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်တောင်ကို Cudi အပေါ်နောဧရဲ့သေတ္တာ၏ထိုင်ယုံကြည်သောပဋိပက္ခ Sefine '' သိရာအရပျရပ်တန့်အပေါ် Sirnak ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအဖြေ, installed cable ကိုကားတစ်စီးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆုတောင်းပဌနာဆုတောင်းပဌနာချင်တယ်။ အကွောငျး [ပို ... ]
သေလွန်သောသူတို့သည်ဖမ်းမိလက်ရှိဖျက်သိမ်းရန် YHT အဆိုပါဒုတိယ Hatter ကောက်နေ | Kocaeli (ဗီဒီယို)
22 / 05 / 2013 Levent Ozen 2
အပိုင်းအစ 42 နှစ်အရွယ် Osman မြေခွေးစုဆောင်းဧရိယာထဲမှာဖမ်းမိလက်ရှိ Kocaeli ရဲ့ Kartepe ခရိုင်Maşukiyeခရိုင်သေဆုံးခဲ့မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုဆောက်လုပ်ရေးဖျက်သိမ်းရန် YHT အဆိုပါဒုတိယ Hatter ကောက်နေ, လျှပ်စစ်လက်ရှိနှင့်အတူသိမ်းဆည်းရမိအနိစ္စရောက်လေ၏။ အဆိုပါ Kartepe ခရိုင်အတွင်းရှိ YHT လိုင်းလုပ်သားများ [ပို ... ]
တစ်ဦးစရိုက်ကေဘယ်လ်ကား Wagon သေ Rized
တစ်ဦးစရိုက်ကေဘယ်လ်ကား cable ကိုကားများ Rized လှည်း Wagon Tetovo လူမျိုး၏မြို့မှာရှိတဲ့ဦးခေါင်းကိုလျှော့ချနိုင်ကျသွားအနိစ္စရောက်လေ၏။ စိုစွတ်လက်ဖက်ရည်ဥယျာဉ်၌စရိုက်ကေဘယ်လ်ကားတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်မြို့Soğuksu Long က (50) ၏ Shaukat လီရပ်ကွက်အတွင်းသည်လှည်းကိုကျော်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုရိုက်ယူခြင်းခေါင်းပေါ်မှာကျဆင်းခဲ့သည်။ [ပို ... ]
NEW xnumx.havalim န်ကြီးရဲ့စကားဟာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှတ်သား
NEW လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား xnumx.havalim န်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဒဏ်ခတ်တံဆိပ်ခေါင်းလုပ်ငန်းစု3ဘီလီယံအထိယူရိုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်များ၏နူးညံ့သောအနိုင်ရရှေ့လက်မှတ်ပေါင်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Binali Yildirim သီချင်းစာသား "ကျနော်တို့ 22.1 ဘီလီယံကိုပေါင်ရတဲ့နေကျနော်တို့နေတဲ့မြေတွင်းကိုဖန်ဆင်း" ဟုပြောသည် [ပို ... ]
သံပန်းကန်တင်ဆောင်လာသော YHT လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးထရပ်ကားကားတစ်စီးပေးဝေ
ကား Bursa ကားထဲတွင်သံပန်းကန် YHT လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးသယ်ဆောင်ခဲ့သည်အသီးအနှံကိုရိတ်ရမှသံပန်းကန်တင်ဆောင်လာသော YHT လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးထရပ်ကားထရပ်ကားသို့ပျက်ကျသွားသည်။ Suat Tunca သုံးသံပန်းကန်ပေါ်တင်ဆောင် Bursa '' အမြင့်မြန်နှုန်းရထား '' လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်မတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်မိမိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ [ပို ... ]
TCDD2။ အာမခံ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်မသင်မနေရအသွားအလာအာမခံလုပ်ငန်းကိုလေလံတင်ဒါနှင့်ပြဿနာများ RELATED ကိစ္စများအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်:2။ ဒေသန္တရရုံး [ပို ... ]
လက်ခံရရှိ Afyon ၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံမှိုနံကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုတင်ဒါမပါလိမ့်မယ်နှင့်ဆက်စပ် Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီး။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: ဘိန်း TCDD ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံ [ပို ... ]